Isla soo jiid si aad uga gudubto dhibaatooyinka
Bishii Febraayo 2019, Mr. Lin Yuanzhong, oo ahaa shaqaale hore oo ka tirsan Shirkadda Changheng, ayaa nasiib darro la xanuunsaday kansarka sanbabada. Hogaamiyaha shirkada ayaa ku wargaliyay dhamaan shaqaalaha ka tirsan kooxda WeChat ee shirkada isla markaana ku tabarucay sida ugu dhakhsaha badan. Shaqaaluhu sidoo kale waxay si firfircoon uga qaybqaateen deeqda iyo barakada fariinta. Waxay ka tarjumaysaa wada noolaanshaha iyo saaxiibtinimada shaqaalaha Chang Heng.
In Bandhigii Gu'ga ee 2020, si loola dagaallamo COVID-2019, Shirkadda Changheng waxay heshay tilmaamo ka yimid dowladda ay khuseyso si ay u diyaariso dib u bilaabista wax soo saarka hore. Maqnaanshaha kheyraad iyo shaqaale, mudane Ge Bingda, gudoomiyaha shirkada, wuxuu habeen iyo maalin ka shaqeynayay isku dubaridka wax soo saarka. Shaqaalaha fog waxay sidoo kale ka adkaadaan dhibaatooyinka, iyagoo halis gelinaya naftooda, iyada oo loo marayo habab kala duwan oo gaadiid ah, dib loogu celiyo shaqooyinkooda.
Shirkadda Changheng waxaa la guddoonsiiyey cinwaanka shirkadda canshuurta bixisa ee Shanghai. Tani waa cadeynta tiknoolajiyada Changheng, laakiin sidoo kale soo celinta dhammaan shaqaalaha Changheng bulshada. 8-dii lasoo dhaafay ee Shiinaha (Shanghai) International Technology Import and Export Fair, badeecadeena waxaa lagu aqoonsaday tayada ruuxiga Shiinaha iyo farshaxanimada. wareysiga iyo warbixinada.
Markii la kordhiyay COVID-19 ee ka hortagga iyo talaabooyinka xakamaynta cudurrada ee Shiinaha, Komishanka Caafimaadka Qaranka wuxuu faray in dadaalka baaritaanka caadiga ah ee nucleic acid iyo baaxadda ogaanshaha ay tahay in si isdaba joog ah loo kordhiyo, iyo in dhammaan tijaabooyinka ay tahay oo ay diyaar u yihiin in la baaro ay tahay in la tijaabiyo. Iyadoo la fulinayo amarka, shaybaarro PCR xirfadleyaal ah ayaa laga aasaasay magaalooyin kala duwan si looga hortago loona xakameeyo COVID-19 ilaa 2020. Imaatinka tartiib tartiib ah ee qalabka PCR, dhibaatooyinka sida awoodda shaqaalaha baaritaanka oo liita ayaa sidoo kale la soo saaray .
Xu Yingchun, oo ah agaasimaha Waaxda Sheybaarka ee Isbitaalka Kulliyadda Caafimaadka ee Peking Union, ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay dhammaadka sannadka 2020: “Gobollada qaarkood, qalabka wax lagu baaro ee PCR iyo soosaarayaasha asiidhka nukliyeerka ayaa ku jira, xitaa sheybaarrada PCR ayaa la sameeyay Si kastaba ha noqotee, furaha ayaa ah in la tababaro shaqaale farsamo oo ku takhasusay cilmiga bayoolojiga oo la tacaali kara aafada. ” Ma muhiim baa.
Mar aan sii fogeyn, qaar ka mid ah shaqaalaha sheybaarka ee caawiya Xinjiang iyo Hebei ayaa sidoo kale sheegay in, marka lagu daro dhameystirka howlaha baaritaanka nucleic acid, barida shaqaalaha sheybaarka maxalliga ah inay si xirfad leh ugu shaqeeyaan qalabka PCR ayaa sidoo kale qeyb ka ah shaqada taageerada. Sidaa awgeed, marka la soo dego shaybaarka PCR, hawlgalka xirfad ee qalabka PCR waa dammaanadda aasaasiga ah ee lagu kordhinayo awoodda sheybaarka PCR.
Maaddaama ay tahay nooca ugu muhiimsan ee ogaanshaha aaladda nucleic acid ee cudurka 'COVID-19' ee ka dhaca Shiinaha, aaladda CHM065 waqtiga dhabta ah ee qalabka wax lagu baaro ee PCR ee Corbition ayaa la aqoonsaday oo ay iibsadeen shaybaarada PCR badankood. Sababtoo ah waxqabadkeeda wanaagsan, hawlgalka fudud, fududahay in la isticmaalo iyo waxqabadka sare ee waqtiga la tijaabiyay, iyo sidoo kale shaqadiisa khadka tooska badan, shaki kuma jiro in shaqaalaha macallimiintu ay u doorteen qaabka waxbarista PCR, dhammaan qaybaha dalka, iyo xitaa adduunka in la qaado mas'uuliyadda culus ee tababarka diyaaradaha.
Waqtiga boostada: Meey-17-2021